Akụkọ - Ụlọ nrụpụta igwe ihe eji emepụta rọba ka nwere nnukwu oghere ahịa
N'ihi na ngwaahịa China na -ebugharị ihe nrụpụta plastik na ụlọ ọrụ ọhụrụ nwere njikọ chiri anya, nwere uru nke arụmọrụ dị elu, ịchekwa ike na arụmọrụ ọnụ ahịa dị elu, mbupụ na mba ndị mepere emepe na etiti na ala dị ala, akụkụ a nke ndị na -achọ ahịa na -enye ihe siri ike, yabụ, N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ahịa ụlọ ọrụ plastik China ga -emepe emepe, visibiliti ga -agbasawanye, asọmpi nke ahịa ga -adịwanye mma. mbupụ na mba ndị na -apụta ga -ebili.
Na mkpokọta, mmụba mbupụ nke ngwaahịa ihe eji arụpụta ihe plastik nke China ga-eweta ọnọdụ kwụsiri ike. na oge ohere dị mkpa dị mkpa nke mmepe, nke ga -enyekwa ụlọ ọrụ na -apụnara mmadụ ikike mmepe na -adịghị agwụ agwụ.
Extruder bụ otu n'ime ụdị ụlọ ọrụ igwe plastik, extruder, 31% nke ngụkọta ngụpụta nke akụrụngwa extrusion plastik nwere atụmatụ ya, iji nwee ikike pụrụ iche nke nnukwu usoro nwere ntinye aka na ụlọ ọrụ igwe plastik n'ime anyị. Mba n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya agbagoro na mmepe mpụ ahịa na -apụta, mmata akara ngwaahịa iji gbasaa n'ihu, meziwanye asọmpi asọmpi, a ga -akwalitekwa oke nke mbupụ na mba ndị na -apụta ugbu a. , uto mbupụ adịla otu ebe.
Ka ọ dị ugbu a, enwere nsogbu ụfọdụ na mmepe nke ụlọ ọrụ igwe ihe eji eme plastik ụlọ, dị ka ikike imepụta ihe dị ala dị ala, obere ọkwa dị iche iche na ahaziri iche, yana itinye ụlọ ọrụ dị ala. enweghị ike ijide igwe plastik mba ofesi dị elu ozugbo enwere ike, mgbe mmepe ogologo oge gasịrị, ịbawanye mmetụta mba ụwa nke ụlọ ọrụ igwe plastik na mba anyị, ikike ịnagide nchedo azụmaahịa, meziwanye ọkwa teknụzụ n'ichepụta na ike n'ozuzu ya. , ya mere, ụlọ nrụpụta igwe na China na uru mbupụ ahia mba ofesi.
N'ihi na ngwaahịa ndị na -ebubata ihe na China nwere njikọ chiri anya na ụlọ ọrụ ọhụụ, yana uru nke arụmọrụ dị elu, ịchekwa ike na arụmọrụ ọnụ ahịa dị elu, mbupụ na mba ndị mepere emepe bụ ọkachasị n'etiti na njedebe dị ala, akụkụ a nke ihe ndị ahịa chọrọ siri ike, Ya mere, mmepe nke ụlọ ọrụ extruder ka nwere nnukwu ohere ahịa. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ ahụ kwuru na n'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ahịa ụlọ ọrụ rọba nke China ga -emepe emepe, visibiliti ga -agbasawanye ọzọ, asọmpi nke ahịa ahụ ga -aga n'ihu n'ihu. Akụkụ nke mbupụ na mba ndị na -apụta ga -ebili.
Uto mbupụ nke ngwaahịa extruder nke China ga-eweta ọnọdụ kwụsiri ike. Site n'echiche ụlọ, obodo anyị ka nọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, teknụzụ ozi, ime obodo, ahịa, mmepe mmepe nke mba ụwa, ka nọ na mmepe nke ihe dị mkpa. Oge ohere, nke ga -enyekwa ụlọ ọrụ na -apụnara mmadụ ikike mmepe na -adịghị agwụ agwụ.
Nweta Wpc, Pelletizer onye na -eme ihe nkiri, Line Wepụ profaịlụ Wpc, Onye Wpc Extruder, Onye na -eri nri na -akwụ ọtọ, Na -akụpịa igwe ihe,